Waa Maxay Sababta Uu Paul Pogba Ugu Cadhaysan Yahay Ferguson Macalinkii Hore Ee Kooxda Man United? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Ciyaartoyda Ay Kooxda Man United Xaraashayso Maku Jiraa Paul Pogba Wax Kastood Uga Baahan Tahay Halkan Ka Akhriso?
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa daboolka ka qaaday sababtii uu uga tegay Manchester United sannadkii 2012 oo uu uga wareegay Juventus iyo shaqsigii go’aanka tegitaankiisu kasoo fulay, waxaanu hoosta ka xariiqay inay jirtay cadho xubno qoyskiisa ka tirsan ay u qabeen tababarihii hore ee United, Sir Alex Ferguson.
Pogba iyo Manchester United ayaa la moodayey inay isku qabteen sidii loo kordhin lahaa heshiiskiisa dhacayay, laakiin arrintu way ka duwan tahay taas, waxaana jirtay sabab kale oo kubbad-sameeyahan ku riixday inuu ka baxo Old Trafford.
Juventus ayaa usoo bandhigtay qandaraas £30,000 uu ku qaadanayo toddobaadkii, taas oo laba-jibbaar ka badnayd mushaharkii uu ka qaadanayay United, laakiin waraysi uu bixiyey ayuu ku sheegay in sababta uu uga tegay kooxdu aanay la xidhiidhin lacagta ee ay ahayd in tababare Sir Alex Ferguson uu ciyaarsiin waayey, xubno ka tirsan qoyskiisuna ka cadhoodeen.
“Walaalkay oo ah taageere United ah ayaa ii sheegay in si dhab ah uu u cadhaysan yahay, xataa intayda in ka badan, marka aanan ciyaarin. Wuxuu ii sheegay: Maya, iska tag. Waad u ciyaari kartaa kooxda, haddii aanay iyagu ku doonayn tag meel kale. Way arki doonaan.” Ayuu Paul Pogba ku bilaabay hadalkiisa.
Kaddib markii uu tegay Juventus, saddexdii ciyaarood ee ugu horreeyeyba waxa lagu soo bilaabay khadka dhexe, waxaanu kula guuleystay afar koob oo horyaalka Serie Ah ka hor intii aanu kusoo laabanin United sannadkii 2016 xilligaas oo lagu soo iibsaday lacag dhan £89 milyan.
Paul Pogba waxa uu sheegay in hooyadii ay hore usii saadaalisay inuu kusoo laaban doono Ingiriiska, tiina ay sidii u dhacday. Waxa kale oo uu soo qaaday duruufihii adkaa ee qoyskiisu ku noolaayeen xilligii ay ka tageen qaaradda Afrika ee ay u guureen Faransiiska.
“Hooyaday ayaa mar walba ii sheegi jirtay: ‘Meel kale ayaad tegi doontaa waanad soo laaban doontaa.’ Mar walba sidan ayay odhan jirtay. Aniguna waxaan ku jawaabayay: ‘Waynu arki doonaa’. “Laakiin waad garanaysaa hooyooyinka iyo waxyaabaha ay tidhi: Waxay igu tidhi, waad kusoo laabanaysaa Manchester, haka walaacin, waanan kusoo laabtay.”
“Aniga qoyskaygu waxay ka yimaaddeen Afrika oo ay soo gaadheen France, si adag ayaanay iigu dedaaleen aniga. Waxaan u malaynayaa in aanad waxba kala soconin yaraantaydii laakiin ay hooyaday si fiican u garanayso, waxaanu ku noolayn guri anaga oo shan ah, taasina way adag tahay hooyo ahaan. Waa inaad quudiso oo aad halkaa la joogto, wax walbana siiso. Aad ayay uga shaqaysay si ay noo caawiso, waad garanaysaa.” Ayuu yidhi isaga oo ka hadlaya noloshii qoyskooda.
“Waxa walba iyada ayaa noo ahayd, sidaa darteed waxay ahayd inaan toban jeer si adag u shaqeeyo waana wax mar walba maskaxdayda ku jirta.
“Si aan u noqdo ka ugu wanaagsan, marka hore, waa inaad wax badan doonto. Mar walba wax badan ayaan doonayay, waxbaynu baran karnaa inta aynu ku jirno da’da 10 ama ilaa 40 ama 50. Mar walba wax baad baran kartaa, Waxaan jecelahay inaan wax cusub barto.”
Si kastaba, Pogba waxa uu inta badan xili ciyaareedkan ku qaatay dhaawac, xilli uu heshiiskiisu dhamaanayo sannad kaddib, waxaana la sheegayaa inay u badan tahay inuu waayihiisa Old Trafford si rasmi ah usoo afjaro.